အရှည် လက်မ ၂၀ နီးပါးနဲ့ ကမ္ဘာ့ လိင်တံအရှည်ဆုံးအမျိုးသား ခွဲစိတ်ကုသမှု ခံယူဖို့ ငြင်းပယ် (NSFW) | Buzzy
လက်ရှိမှာ ဒီပမာဏကြောင့် သူ့အနေနဲ့ ဘာမှ လုပ်မရပါဘူး
Roberto Esquivel Cabrera ဟာ အသက် ၅၄ နှစ်အရွယ် ရှိပြီဖြစ်ကာ မက္ကဆီကိုနိုင်ငံက ဖြစ်ပါတယ် ၊ များစွာသော သတင်းတွေအရ သူ့ကို ကမ္ဘာ့အကြီဆုံး လိင်တံပိုင်ရှင်လို့ အသိအမှတ်ပြုထားပါတယ်။ သူ့ရဲ. အတိုင်းအတာဟာ ၁၈.၉ လက်မရှိတယ်လို့ သိရပြီး ၊ ဒါကို ခွဲစိတ်ကုမှု ပြုလုပ်ဖို့ ဆေးပညာရှင်တွေက ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမယ့် သူကတော့ ငြင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။
Roberto Esquivel Cabrera ဟာ အသကျ ၅၄ နှဈအရှယျ ရှိပွီဖွဈကာ မက်ကဆီကိုနိုငျငံက ဖွဈပါတယျ ၊ မြားစှာသော သတငျးတှအေရ သူ့ကို ကမ်ဘာ့အကွီဆုံး လိငျတံပိုငျရှငျလို့ အသိအမှတျပွုထားပါတယျ။ သူ့ရဲ. အတိုငျးအတာဟာ ၁၈.၉ လကျမရှိတယျလို့ သိရပွီး ၊ ဒါကို ခှဲစိတျကုမှု ပွုလုပျဖို့ ဆေးပညာရှငျတှကေ ကမျးလှမျးခဲ့ပမေယျ့ သူကတော့ ငွငျးပယျခဲ့ပါတယျ။
သူဟာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွေတုန်းက သတင်းခေါင်းကြီးပိုင်းတွေမှာ ဖော်ပြခံရပြီး အတော်လေးကို လူစိတ်ဝင်စားခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။ သူ့ရဲ. လိင်အဂါင်္အတိုင်းအတာဟာ အမည်ရိကန်မင်းသား Jonah Falcon ထက် ပိုကြီးပြီး ၊ သူ့အဂါင်္အရွယ်အစားဟာ အဲ့တုန်းက ပုံမှန်အချိန် ကိုးလက်မခွဲနဲ့ ထောင်မတ်ချိန်မှ ၁၃.၅ ထိ ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
သူဟာ ၂၀၁၅ ခုနှဈတှတေုနျးက သတငျးခေါငျးကွီးပိုငျးတှမှော ဖျောပွခံရပွီး အတျောလေးကို လူစိတျဝငျစားခွငျး ခံခဲ့ရပါတယျ။ သူ့ရဲ. လိငျအဂါင်ျအတိုငျးအတာဟာ အမညျရိကနျမငျးသား Jonah Falcon ထကျ ပိုကွီးပွီး ၊ သူ့အဂါင်ျအရှယျအစားဟာ အဲ့တုနျးက ပုံမှနျအခြိနျ ကိုးလကျမခှဲနဲ့ ထောငျမတျခြိနျမှ ၁၃.၅ ထိ ရှိတယျလို့ သိရပါတယျ။
သူက ကျွန်တော်က ကမ္ဘာ့ အဂါင်္အကြီးဆုံးသူအဖြစ် နာမည်ကြီးမှန်းသိပါတယ် ၊ ဒီအခြေအနေကို ဘယ်သူမှ ပိုင်ဆိုင်မထားဘူးဆိုတာလည်း ကျွန်တော်သိပါတယ် ၊ ဒီအတွက်လည်း ကျွန်တော်ပျော်ပါတယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။ သူက သူ့အနေနဲ့ Guinness Book မှာ မှတ်တမ်းဝင်ချင်ပေမယ့် သူ့ကို အသိအမှတ်မပြုကြဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
သူက ကြှနျတျောက ကမ်ဘာ့ အဂါင်ျအကွီးဆုံးသူအဖွဈ နာမညျကွီးမှနျးသိပါတယျ ၊ ဒီအခွအေနကေို ဘယျသူမှ ပိုငျဆိုငျမထားဘူးဆိုတာလညျး ကြှနျတျောသိပါတယျ ၊ ဒီအတှကျလညျး ကြှနျတျောပြျောပါတယျလို့ သူက ပွောပါတယျ။ သူက သူ့အနနေဲ့ Guinness Book မှာ မှတျတမျးဝငျခငျြပမေယျ့ သူ့ကို အသိအမှတျမပွုကွဘူးလို့ ဆိုပါတယျ။
ဆရာဝန်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Jesus David Salazar Gonzalez က ကျွန်တော်တို့ သူ့ကို ဒီအဂါင်္အရွယ်အစားကနေ ပုံမှန်အနေအထား ဖြစ်အောင် ခွဲစိတ်ဖို့ အကြံပေးထားပါတယ် ၊ ဒါမှသာ သူ့အနေနဲ့ ပုံမှန်အတိုင်း နေထိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး ချစ်တင်းနှောလို့လည်း ရမှာပါ ၊ အခုအနေအထားနဲ့ကတော့ ဘာမှ လုပ်မရဘူးလို့ ဆိုပါတယ်၊ ဒါကို သူ့က လက်မခံခဲ့ပါဘူး ။
ဆရာဝနျတဈဦးဖွဈတဲ့ Jesus David Salazar Gonzalez က ကြှနျတျောတို့ သူ့ကို ဒီအဂါင်ျအရှယျအစားကနေ ပုံမှနျအနအေထား ဖွဈအောငျ ခှဲစိတျဖို့ အကွံပေးထားပါတယျ ၊ ဒါမှသာ သူ့အနနေဲ့ ပုံမှနျအတိုငျး နထေိုငျနိုငျမှာ ဖွဈပွီး ခဈြတငျးနှောလို့လညျး ရမှာပါ ၊ အခုအနအေထားနဲ့ကတော့ ဘာမှ လုပျမရဘူးလို့ ဆိုပါတယျ၊ ဒါကို သူ့က လကျမခံခဲ့ပါဘူး ။
သူက အခုလို ကြီးမားတဲ့ လိင်အဂါင်္ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းကြောင့် ဆိုးကျိုးကို ခံစားနေရသူလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီအခြေအနေကြောင့် သူဟာ ဆီးသွားရခက်ခဲတာ ၊ အိပ်ဖို့ ခက်ခဲတာ ၊ ပြေးလွှားလို့မရတာမျိုးတွေ ဖြစ်ပွားသလို ချစ်တင်းနှောလို့လည်း မရပါဘူး ။ သူ့အနေနဲ့ ချစ်တင်းနှောဖို့ အခွင့်အရေး ၂ ကြိမ် ရရှိခဲ့ပေမယ့် တစ်ကြိမ်မှာတော့ သူ့အဖော်က မြင်တာနဲ့ ထွက်ပြေးသွားပြီး နောက်တစ်ဦးကလည်း ဘယ်လိုမှ ဆက်ဆံဖို့ အဆင်မပြေခဲ့ဘူးလို့ သိရပါတယ်။
သူက အခုလို ကွီးမားတဲ့ လိငျအဂါင်ျပိုငျဆိုငျထားခွငျးကွောငျ့ ဆိုးကြိုးကို ခံစားနရေသူလညျး ဖွဈပါတယျ ။ ဒီအခွအေနကွေောငျ့ သူဟာ ဆီးသှားရခကျခဲတာ ၊ အိပျဖို့ ခကျခဲတာ ၊ ပွေးလှားလို့မရတာမြိုးတှေ ဖွဈပှားသလို ခဈြတငျးနှောလို့လညျး မရပါဘူး ။ သူ့အနနေဲ့ ခဈြတငျးနှောဖို့ အခှငျ့အရေး ၂ ကွိမျ ရရှိခဲ့ပမေယျ့ တဈကွိမျမှာတော့ သူ့အဖျောက မွငျတာနဲ့ ထှကျပွေးသှားပွီး နောကျတဈဦးကလညျး ဘယျလိုမှ ဆကျဆံဖို့ အဆငျမပွခေဲ့ဘူးလို့ သိရပါတယျ။